जिरे खु;र्सानीको ‘जिरे’ ठुलो भएपछि शिशिर भण्डारीको गी,तमा खेले । शिशिरको यस्तो अचम्मको रुप (भि;डियो हेर्नुस) – Ap Nepal
जिरे खु;र्सानीको ‘जिरे’ ठुलो भएपछि शिशिर भण्डारीको गी,तमा खेले । शिशिरको यस्तो अचम्मको रुप (भि;डियो हेर्नुस)
हामीले सानैदेखि जिरे खुर्सानीमा देख्दै आएको ‘जिरे’, अहिले ठुलो भए । इशान राउत फेरी कलाकारितामा फर्केका छन् तर ठुलो भएपछि अभिनय देखाउने उपयुक्त थलो र मौका इशानले पाएका छैनन् ।
‘सानै भैरहेको भए मैले काम पाउँथे होला’ भन्ने गुनासो उनलाई छ । २१ बर्षका उनले सानोमा सँगै काम गरेका आदरणिय कलाकारहरु मह जोडी, राजेश हमाल, बिराज भट्ट लगायत अन्य धेरै कलाकारहरुलाई उनले ठुलो भएपछि भेट्न पाएका छैनन् ।
बिस्तारै काम पाउन छोडेपछि उनीरोएका थिए । यसैबिच जिरेको नयाँ म्युजिक भिडियो आउने भएको छ । जिरेले शिशिर भण्डारीको साथमा अभिनय गरेको गीतमा शिशिरको साथीको भुमिका बहन गरेका छन् । गीतको भिडियो माघ २५ गते आईतबार आउँदैछ, गीतको सुटिँग यसरी गरियो ।
Prevरुरु जलविध्युतलले आइपिओ निष्काशनका लागि पायो अनुमति, प्रतिकित्ता कति पर्ला त ?
Nextआज ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ , तोलामा कति पुग्यो त ?
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले मेयरका उम्मेदवार बालेनको समर्थन गर्दै यस्तो भनिन् …
स्वर सुन्दा सबै छक्क परे, बिचरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन यस्तो काम, खोलाको ढुङ्गा बेचेर परिवार पाल्छि न (भिडियो सहित)